ဟွာဝေးက အက်ပဲလ်နဲ့ ဆမ်ဆောင်းကို သူ့ရဲ့ Wireless 5G မူပိုင်ကြေး ကောက်ခံမည် - Pandaily
Categories: Industry ကိုGloria Li မတ် 17, 2021 မတ် 17, 2021 မှာ Posted
Huawei သည် 5G နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် အစီအစဉ်ရှိပြီး ယခင်အစဉ်အဆက်က မိုဘိုင်းဖုန်း ကွန်ရက်အတွက် ဝန်ဆောင်ခများ ကောက်ခံခဲ့သည်။ Huawei မှ ဉာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့် ဒါရိုက်တာ Jason Ding & nbsp ၏ အဆိုအရေျပာေနၾကတယ္အင်္ဂါနေ့ လှုပ်ရှားမှု .
ဟွာဝေးရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ ပြိုင်ဖက်တချို့ထက် သက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Nokia က ၎၏ 5G နည္းပညာအတြက္ လိုင္စင္ႏႈန္းထားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကန္႔သတ္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္ပစၥည္းတစ္ခုလွ်င္ ၃ ယူ႐ို (Common 3.58 ေဒၚလာ) ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆြီဒင္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ Ericsson က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စက္ပစၥည္းတစ္ခုလွ်င္ ၂.၅ ေဒၚလာမွ ၅ ေဒၚလာအထိ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CNBC သတင္းပို႔.
သတင်းများအရ တရုတ်တယ်လီကွန်း ကုမ္ပဏီကြီးများသည် Apple နှင့် Samsung တို့နှင့် ညှိနှိုင်းရန် ကြိုးပမ်းနေပြီး အခြားမိုဘိုင်းကုမ္ပဏီကြီးများကလည်း 5G မူပိုင်ကြေး ကောက်ခံမှုများ ပြုလုပ်နေသည်သီချင်းခြောက်ပုဒ်ကို၊ ကုမ္ပဏီ ဥပဒေအရာရှိချုပ်။ ဟွာဝေးက ၂၀၁၉-၂၀၂၁ ကြားမှာဝင်ငွေ ၁၂ သန်းကနေ ၁၃ သန်းခန့်အထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ မူပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကနေ သိရပါတယ်။
မ်ဳိးဆက္သစ္ ဘိုင္အိုကြန္ရက္ကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ Huawei, Nokia, Ericsson, LG Electronic ႏွင့္ Qualcomm တို႔အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ကမၻာ့စမတ္ဖုန္း အျပန္အလွန္ လည္ပတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္ကူညီမည့္ စံႏႈန္းအသစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ အဲဒီကုမၸဏီေတြဟာ ဒီဇိုင္နာနည္းပညာကို မူပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။ ထိုမူပိုင်ခွင့်များသည် 4G သို့မဟုတ် 5G Standard ပါဝင်မည်ဖြစ်ကာ “Standard Picture” သို့မဟုတ် SEP အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရမည် ဖြစ်သည်။
လူပြောများတာကတော့ တယ်လီကွန်း ကုမ္ပဏီတွေဟာ စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုဖို့ မူပိုင်ကြေးကို ကောက်ခံဖို့ SEAP က ထုတ်လုပ်တဲ့စက်တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။
စိစစ္ျခင္းနည်းပညာသုတေသနကုမ္ပဏီ GreyB & nbsp ၏ အဆိုအရ ၊ Huawei ဟာ 3007 5G မူပိုင်စီးရီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး 18.3% ကတော့ SEP– ထက် ကမ္ဘာ့ဘယ်ကုမ္ပဏီကိုမဆို ပိုမိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
ဒီ Tinnbsp နည်းပညာဟာ ထူးကဲတဲ့ အလားအလာရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့5G စက်ပစ္စည်းရောင်းအားသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၅.၃ သန်းရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ၆၆၇၉ သန်းအထိ ရှိလာမည် ဖြစ်သည်။Joint Market Researchဟွာဝေးက သူ့ရဲ့ 5G နည်းပညာဟာ ငွေရှာဖို့ အစပျိုးလာဖွယ်ရှိပြီး အမေရိကန်ရဲ့ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် စမတ်ဖုန်းတင်ပို့ရောင်းချမှု ဆုံးရှုံးမှုအထိဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း Donald Trump အစိုးရလက္ထက္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သူေတြကို Black List စာရင္းထဲ ထည့္သြင္းလိုက္တာေၾကာင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ Huawei ရဲ႕ ပို႔ကုန္အပိုင္းကို ပိတ္ပင္လိုက္သလို နည္းပညာပိုင္းမွာ Huawei ရဲ႕ Chip နဲ႔ စမတ္ဖုန္းေတြကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ရိုက်တာTrump ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္းအတြင္းမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ၿဗိတိန္နဲ႔ ဂ်ပန္ အပါအဝင္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေတြကို ဖိအားေပးၿပီး သူတို႔ရဲ႕ Huawei ရဲ႕ စက္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ရပ္တန္႔ဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာ 5G ကြန္ရက္ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။